केरुङ नाका खुल्नुमा पुर्वप्रम गिरिजाप्रसादको चासो, नेपाली पर्यटन व्यवसायीले तिब्बतबाट धेरै लाभ लिए - Artha Path Artha Path
प्रकाशित मिति : 1 July, 2020 1:18 pm
सुमन पाण्डे, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी
यसरी खुल्यो केरुङ नाका
सन् २००० मा नेपालमा चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमण भएको थियो । त्यसबेला चिनियाँ पर्यटक नेपाल ल्याउनेबारेमा कुराकानी भएको थियो । नेपालको पहिलेदेखि नै मुख्य व्यापार तिब्बतसँग भइरहेको छ । विदेशी पर्यटक नेपाल भएर घुम्न तिब्बत जाने र कैलाश मानसरोवर जाने गर्थे । सन् २००१ मा सुमन पाण्डे टे«किङ गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को अध्यक्ष भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा आशालाग्दो सुरुवात भयो । उनको नेतृत्वमा रहेको टानले चीनको शासित क्षेत्र ल्हासाको तिब्बेत एसोसिएसन अफ ट्राभलसँग सम्झौता गरेर पर्यटक आदान–प्रदानको सहजता सुरु भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि दुवै देशको पर्यटक आदान–प्रदान गर्ने समझदारी भयो । सन् २००३ मा तिब्बतको गभर्नरले नेपाल आएर काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीको भ्रमण गराएपछि विधिवत रूपमा तिब्बती पर्यटक आउने क्रम सुरु भएको थियो ।
नेपाल र तिब्बतको पर्यटन आवागमन सहज गर्ने भनेर पर्यटन सचिवस्तरीय एग्रिमेन्ट भयो । त्यसपछि हरेक वर्ष नेपाल–तिब्बतको पर्यटन सहजीकरण गर्नेबारे बाइलाइटर मिटिङ भइरहेको छ । यस्तो मिटिङ एक वर्ष ल्हासामा एक वर्ष काठमाडौंमा हुँदै आएको छ । तिब्बती पर्यटक ल्याउन धेरै मिहिनेत गरेको बताउँछन् सुमन पाण्डे । विगतमा तिब्बतको पर्यटक नेपाली गाइडले नै चलाउँथे । हामीले त्यतिबेला नै चिनियाँ पर्यटकमा फड्को मारिसकेका थियौँ । २०–२५ हजार चिनियाँ कैलाश मानसरोवर गएका थिए । पछि तिब्बतमा अनेक सुरक्षा संवेदनशीलता बढेसँगै चिनियाँ पर्यटक घट्न थाल्यो । चीनको केन्द्र सरकारले भन्दा तिब्बतमा आफैँ सुरक्षा कानुन स्ट्रिक छ । यसमा सरकारी पक्षले ध्यान दिनुपर्छ । तिब्बतमा सुरक्षा खतरा बढेसँगै नेपालमा तिब्बेतियन आउने क्रम सोचेभन्दा बढेको बताउँछन् पाण्डे । हाम्रो सरकारी पक्ष पर्यटकमैत्री हुने हो भने तिब्बतको पर्यटकबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्छ ।
सन् २००१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला चीन भ्रमणमा जाँदा हामी पर्यटन व्यवसायीसँग पर्यटन क्षेत्रबारे सुझाब मागिएको थियो । मैले नै पर्यटन र व्यापारका लागि केरुङ नाका खोल्नुपर्छ भनेर सुझाब पठाएँ । त्यतिबेला म टानको उपाध्यक्ष थिएँ । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मन प¥यो मेरो प्रस्ताव र सरकारको एजेन्डामा प¥यो । सरकारले त्यतिबेलै केरुङ र मुस्ताङ नाका खोल्ने प्रस्ताव चीनसमक्ष गरेको थियो । पछि सन् २००९/२०१० सम्म पनि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन, हामीले बाइलाइटर मिटिङमा कुरा उठाएका थियौँ । त्यतिबेला चिनियाँले हाम्रोतर्फ पूर्वाधार बन्यो, नेपालतर्फ बनाउन आग्रह गरेको थियो ।
२०१५ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि देश नै लागेर केही पूर्वाधार बन्यो । केरुङ र मुस्ताङ व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता भएको थियो । गिरिजाबाबुको नजर केरुङ नाकामा पनि प¥यो । धेरै ढिला भए पनि नाकाचाहिँ खुल्यो । धेरै वर्षपछि मात्रै मैले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई एक पार्टीमा भेट भएको बेलामा सरकारले केरुङ नाका चाँडो खोलेमा पर्यटकीय र व्यापार दुवैैमा लाभ लिन सकिने बताएको थिएँ ।
सरकारले इच्छाशक्ति देखाएन
जब भारतले नेपालको संविधान जारी गरेको निहुँमा नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला दोस्रो देशसँग नेपालले व्यापार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । नेपालका नेताको इच्छाशक्ति नै देखिनँ मैले त । आज पाँच वर्ष भयो भारतले नाकाबन्दी लगाएको अहिलेसम्म पनि पूर्वाधार उस्तै नै छ । सरकारले पुनः भारतले नाका खोल्यो, केरुङ नाका खोल्न त्यहाँ पूर्वाधार बनाउन चासो दिएन । रसुवाको राम्चेमा बर्सेनि बगिरहने पहिरो छ, त्यसले ठूला कन्टेनरसहितका लोड गाडी धान्नै सक्दैन ।
अहिले तल त्रिशूलीको किनारैकिनार स्याफ्रुबेंसी पुग्ने बाटो खोलियो, तर बाटो राम्रो छैन । हिउँदमा मात्रै सञ्चालन हुन्छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि हाम्रा नेताले तातोपानी र केरुङ नाका खोल्नुपथ्र्यो । पर्यटन क्षेत्रबाट मैले चीनसँग धेरै काम गरेँ । तिब्बतको पर्यटन व्यवसाय नेपाली व्यवसायीले चलाउँछन् । अनुमति मात्र उनीहरूसँग लिने हो । कम्पनी, इक्युपमेन्ट, काम गर्ने सबै नेपाली नै हुने हो । नेपाली व्यवसायीले तिब्बतको पर्यटन व्यवसायबाट धेरै लाभ लिएको छ । म ल्हासा दिनको ६ पटक जान्थेँ । २००८ मा ओलम्पिकको टाइममा ल्हासामा राजनीतिक समस्या आएको थियो । सुरक्षा अवस्था कडा हुँदै गयो । त्यसको असर तिब्बतीय पर्यटनमा देखिन थाल्यो ।
सरकारी तहबाट त्यसलाई वार्ता–संवाद गरेर पर्यटक बढाउन चाहेन । भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका खोल्न पनि चीनले चासो देखाएन । त्यहाँबाट पनि एन्टिचाइनिज मुभमेन्ट देखिन थाले पनि उसले एक महिनामा सम्पन्न गर्न सक्ने पूर्वाधार वर्षौं लगाएर बल्ल बनायो । २०१९ मा १४ करोड चिनियाँले विदेश भ्रमण गरे । त्यसको १ प्रतिशत चिनियाँ पर्यटक नेपालले आकर्षित गर्न सक्यो भने १४ लाख हुन्छ । २० लाख पर्यटकको लक्ष्य चीनबाटै पूरा हुन सक्छ । चिनियाँ पर्यटक ल्याउने हाम्रो भिजन हो, तर मिसन के त ? कसरी ल्याउने, कठालामा समातेर तानेर त आउँदैन । हामी भाषणमा धेरै कुरा गर्छौं, तर मिसन बनाउन सक्दैनौँ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्र उठाउने भनेर ठूला भाषण पनि हुन्छ, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पनि पर्छ, तर सरकारी कार्यशैलीमा त्यस्तो देखिँदैन । हाम्रो समस्या यही हो ।
(अर्थपथका सम्पादक विष्णु तारुकेसंग कुराकानीमा आधारित)
आइतबार सुन तोलामा ९ सयले घट्यो
काठमाण्डौ । केही दिनदेखि लगातार बढेको सुनको भाउ आज साताको पहिलो दिन आइतबार तोलामा ९